ओलीभन्दा देउवा गतिला, कम्युनिस्टभन्दा कांग्रेस संस्कारी : नेपाल – Taja Khawar
मंगलबार १४ आषाढ २०७९
भारी वर्षाका कारण झापाका अधिकांश स्थान डुवानमा, नदी गाउँमा पस्ने खतरा
कृषकको रोजाइमा अकबरे , अकबरेबाट छ करोडभन्दा बढी आम्दानी
जापान लैजाने भन्दै ४ जनासँग बिहे अनि डि’भोर्स गर्ने तामाङ्ग, विश्वासघात गरेको अभियोगमा पक्राउ
अमेरिकामा ट्रकभित्र ४६ जना आप्रवासीको शव फेला
बेपत्ता पुरुषको शव खोलाले बगाउँदै गरेको अवस्थामा भेटियो
बिदाईमा रोएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि झाँक्रीले भनिन् – आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ, सबैसँग क्षमा चाहन्छु
ओलीभन्दा देउवा गतिला, कम्युनिस्टभन्दा कांग्रेस संस्कारी : नेपाल
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८ समय: ११:४०:०४
साउन २४, २०७८ – \_
Men, Eliminate Your Sex Problems If You Do This Daily
काठमाडौँ — एमालेको विवाद समाधानका लागि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप तीव्र छ । तर पहिलो तहका नेताहरू सहमति जुटाउने कोसिस भन्दा दुरी बढाउने खालका गतिविधिमा सक्रिय छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल नै एक अर्काबीच टिप्पणी र भनाभनमा उत्रिदै समाान्तर गतिविधिलाई उक्साइरहेका छन् ।
शुक्रबार आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटिको बैठक सकेर शनिबार दोलखाका कार्यकर्तालाई भर्चुअल सम्बोधन गरेका नेता नेपालले पार्टी एकता, सरकार र ओलीका प्रवृत्तिमाथि लामो व्याख्या गर्दै आफ्नो बाटो स्पष्ट रुपमा बताएका छन् । प्रस्तुत छ नेपालको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश :
हाम्रा कार्यक्रम धमाधम लगातार अगाडि बढाउनुपर्छ । केपी ओलीले आफ्ना कार्यक्रम धमाधम गरिरहेका छन् । हामी तमासा हेरेर उता के गर्छन्, के भन्छन् भनेर कुरेर बसिरहेका छौं । कुरेर बस्ने केही नगर्ने मान्छेहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौं । संसार लाक्षीहरूको होइन, कर्मीहरूको हो । गतिशीलहरूको हो । जो गतिशीलतामा विश्वास गर्छ, त्यो अगाडि बढ्छ । बाधा अवरोधहरू पन्छाउँदै अगाडि बढ्छ । यस अर्थमा तपाईंहरू अघि बढ्नुभएको छ, खुसी लागेको छ ।
कोही कुरेर बस्नुभएको छ, केपी ओलीले के भन्ला चित्त दुखाउलान् कि ∕ उनी धमाधम सदस्यता बाँडेर हिँडिरेहका छन्, गालीको कारखाना चालु गरिरहेका छन् । गालीका गोलाबारुदहरू पड्काइरहेका छन् । हामी ‘म्याउँ–म्याउँ’ गरेर बसिरहेका छौं । ‘म्याउँ–म्याउँ’ गर्नेहरूले केही गर्न सक्दैनन् । मैले त यो संसारमा धेरै मान्छेलाई देखेको छु । नाडी छामेको छु । जसको नाडीको धड्कन कम छ, त्यसले केही गर्न सक्दैन । हुन त धड्कन बढी भएकाले पनि पार लाग्न सग्दैन । ठिक्क धड्कन हुनुपर्छ । तर जसको मुटु बलियो छ, उसले चुनौतिको सामना गर्न सक्छ ।
अहिले हामीले अन्तिम मौका दिएका छौं, केपी ओलीलाई । अन्तिम मौका के दिएका छौं भने कथित बैठक रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न ? दोस्रो उहाँले पार्टी सदस्यता वितरण गर्ने कामलाई रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न ? उहाँले अस्तिको बैठकबाट निर्णय गरेर धमाधम वडा तहसम्म अधिवेशन गर्ने काम रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न ? गाली गलौजको उहाँको गोला बारुद बन्द हुन्छ कि हुन्न ? यसबाट उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसो त यसै पनि क्लियर छ । मलाई कुनै भ्रम नै छैन, द्विविधा छैन । केपी ओली सुध्रिएलान् भन्ने मलाई फटक्कै पत्यार छैन । आजको डायरीमा नोट गरेर राख्नुस् । सुध्रिहाले भने म ठान्नेछु मैले अलि आग्रह पालेको रहेछु कि क्या हो । तर यदि केपी ओली सुध्रिएनन् भने उनले कुनै पनि कुरालाई मानेनन् भने गर्ने के त ? त्यहाँ गएर फस्ने ? त्यहाँ गएर रुने चिच्याउने कराउने टाउकोमा हात राखेर बस्ने ? त्यो मन्जुर छैन ।
हामी सम्मानजनक एकताको कुरा गरिरहको छौं, केपीले मान्न तयार छन् त ? आज पनि मैले लक्षण राम्रो पाएको छैन । तर पनि कहिलेकाँही १२ बज्दासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो पर्खिन्छौं हामी । हामीले अगाडि बढ्ने अवस्थामा कार्यकर्ताको मनोबल गिरायौं भने, निराश बनाउन चाह्यौं भने त्यो हामीले ठूलो अपराध गरिरहेका हुन्छौं । कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न भन्ने हो कि संगठित भएर अघि बढ्न । आफ्नो ठाँउको एकता, केपी ओलीसँगको एकता त दोस्रो कुरा भयो ।
ओली सबैतिरबाट अब एक्लिए’
भोलि सिंगो पार्टी एकताबद्ध बनाइयो भने व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौतीको सामना गर्न सकिनेछ । आजसम्म ओलीको गलत प्रवृतिका विरुद्धमा जुध्दै आएका छौं । खासगरी उहाँको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा जुधेका छौं । यसमा कुनै द्विविधा छ ? उनले प्रतिगामी कदम चालेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । त्यसको पछाडिको एउटै कारण के हो भने उनले स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाउन पाएनन् । उनको आलोचना भयो । विधिमा चल्न चाहेनन् । यी सबै कारणले समस्या खडा भएको होइन ? पार्टीको बैठक बोलाउनु भएन, अरुको कुरा सुन्नु भएन । सामूहिकतामा चल्न भएन । व्यक्तिवाद हावी भयो । मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउनुभयो । गुटवादी तरिका अपनाउनुभयो । आफू पक्षधरहरूलाई जे पायो त्यै बोल्न लगाउनुभयो । नेताहरूको मानमर्दन गर्न लगाउनुभयो । यो चिज उहाँलाई मान्य भयो । त्यो भइसकेपछि उहाँले दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो ।
तर उहाँका प्रत्येक कदम असफल हुँदै गए । किनभने हामीले ती कदम गलत छन् भन्ने सही निष्कर्ष निकाल्यौं र त्यसका विरुद्ध उभिने आँट गर्‍यौं । सिंगो जनसमुदायलाई उतार्‍यौं, सिंगो समाजलाई कन्भिन्स गर्‍यौं । सिंगो समाज ओलीको प्रवृतिबाट वाक्कदिक्क भयो । अहिले सबैतिरबाट ओली एक्लिएको अवस्था छ । तरपनि उहाँले चेत्नुभएको छैन । उहाँका प्रत्येक भाषण सुन्नुस् । मेरो बारेमा के बोल्या छ ? हाम्रो पक्षका साथीहरूका बारेमा के बोलेका छन् ? उनका तलतलका महेस बस्नेत लगायतका उनका एक–एक व्यक्तिका बारेमा लिखतहरू भाषण अभिव्यक्तिहरू सुनाइदिनुस् । त्यसले संकेत के गर्छ ? संकेत राम्रो गर्छ ? तैपनि भ्रम ? तैपनि केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ भने ठिकै छ ।
हामी अपराधी /देशद्रोही, महन्थ र कमल थापा क्रान्तिकारी ?’
हाम्रो अर्को पार्टी खोल्ने चाहना होइन । यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाएर अगाडि बढाउने नै हो । तर केपी ओलीले पार्टर्ी सिध्याइसकेको होइन ? दक्षिणपन्थी भासमा लागिसकेको होइन? उहाँको सबभन्दा प्यारो महन्थ ठाकुर होइन ? भारतीय नागरिकलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउन लागिपरेको होइन ? जसले नेपालको तराई क्षेत्र टुक्राउन अलग्याउन खोजेको होइन ? जसले भारतीय दूतावासमा चाकरी लगाउने र राति १०/११ बजे जाने गरेको होइन बालुवाटारबाट ? जसले विदेशीहरूको पूरै आदेश पालन गर्ने गर्दछ, त्यो होइन ? अनि कमल थापा के हो ? दक्षिणपन्थी हो कि क्रान्तिकारी वामपन्थी हो ? उसँग केपी ओलीको गठबन्धन छैन ? अनि राजतन्त्रवादीहरू उत्साहित भएका होइनन् ? धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दु अतिवादलाई हाबी गर्न खोजेको होइन ? कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले आफ्नो निवासबाट राम र हनुमानको मूर्ति निकाल्ने ? यहाँ त माक्र्सको मूर्ति पनि पूजा गरेर निकाल्न हुँदैन ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको हामीले भावनाको कदर गर्ने हो । अरुको पनि कदर गर्ने हो । बुद्धिस्टहरूको पनि सम्मान गर्ने हो । कसैको अपमान गर्ने होइन । तर कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले कस्तो किसिमको नीति लिनुपर्छ ? यो छलफल र विश्लेषणको विषय होइन ? गलतलाई गलत भन्ने काम गर्नु के अपराध हो ? औंलो ठड्याउन आँट साहस गर्नु के त्यो अपराध हो ? केपी ओलीको आँखामा ती सबै अपराध हुन् ।
अपराधी, देशद्रोही, गद्दार अनि केपी ओलीको दासता स्वीकार गर्नु त्यो के क्रान्तिकारिता हो ? यी सबै कुराको समीक्षा र विवेचना हुनेछ । यसका बाबजुद विवादित कुरा थाती राखिदिने हो भने पनि मानौला । तर के त्यो थाती रहला त्यहाँभित्र गइसकेपछि ? दैनिक दन्तबझान हुनेछ । दैनिक झगडा हुनेछ । यी केपी ओलीका जति पनि हनुमान छन्, जे मुखमा आयो त्यो बोल्नेहरू छन्, बाँदर सेनाहरू छन् । साइबर सेना स्यालहरू छन् । यी सबैमा नियन्त्रण गर्न सकिएला ? कोही आँट भएका मान्छेहरू छन् भने भनिदिनुपर्‍यो । म आँट भएका मान्छेलाई नेता मान्न म तयार छु । त्यो सम्भव छ ?
सुध्रिने भ्रम नराखौं
मैले देखिसके, सबका नाडी छामिसक्या छु । खुट्टी पनि देखिसक्या छु । त्यसो हुनाले तैपनि हामी ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु’ भन्छ अन्तिम प्रतिक्षामा छु । अब तपाईंहरूपनि सही निष्कर्षमा पुग्नुभएको होला । सम्मानजनक एकता भएन भने अर्को बाटो जाने । अर्को कम्युनिस्ट पार्टर्ी क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने । कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने । अरु शक्तिहरूलाई पनि मिलाउने तालमेल गर्ने । केपी ओलीको पार्टीभित्र पनि क्रान्तिकारी छन् भने पार्टी एकीकरण भइहाल्छ । अहिले नै त्यहाँभित्र क्रान्तिकारीहरूको आँट हिम्मत छ भने त्यसलाई पनि मौका दिएका छौं । तर केपी ओली सुध्रिएलान् भन्ने भ्रम छ भने भ्रम नराखौं ।
केपीलाई विदा गर्न पाए, सबभन्दा राम्रो अहिले नै हो । ५ वर्षको अवधि पुगिसकेको छ । ०७१ सालमा महाधिवेशन भयो । ५ वर्ष भनेको ०७६ मा अवधि सकियो । तैपनि २ वर्षको अतिरिक्त समय पाइसके । ७ वर्ष अध्यक्ष भइसके । दुई वटा पार्टीको अध्यक्ष पनि भइसके । प्रधानमन्त्री भएर पनि चलाइसके । अब किन चाहियो ? हुँदैन भने पनि छिटो महाधिवेशन गर्ने हो । बीचको अवधिमा । दुई नेताको हस्ताक्षर गर्ने कुराहरू समान हैसियतको दुईवटा व्यक्तिहरू एउटै पदमा रहने अवस्था भएन भने केपी ओलीले कसैलाई टेर्ने छैनन् । कुनै एउटा अनुकूल स्थिति बनाउने बाटो हुन सक्दछ । विश्वास बनाउने आधार हुन सक्दछ । यस अर्थमा हामीले भनेका छौं १० बुँदामा लेखिएको जेठ २ गते फर्किने एउटा कुरा भयो । २ गते फर्किइसकेपछि २३ जना मान्छे थपिएको छ भने बहुमतको आडमा उनले निर्णय गर्न थाले भने त्यो बेलामा हामी के गर्छौंं ? टाउकोमा हात राखेर बस्छौं ? तुरुन्त एउटा निर्णय गरिदिन्छन कि यसअघि पार्टीको निर्णयका विरुद्धमा भएका गतिविधिलाई बदर गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा के गर्छौं हामी ? फरक मत लेख्छौं त्यहाँ ? रोएर बस्छौं त्यहाँ ? मुख देखाउँदै सबैका सामूमा ।
विप्लवले त १० हजार तयार पारे हामी रोएर बस्ने ?’
केपी ओलीलाई प्रधाानमन्त्रीबाट हटाउँ भनेर स्थायी कमिटी एकजुट भएको होइन ? केन्द्रीय कमिटी एकमत भएको होइन ? बरु ल्याउँ ठूटो राखिदिउँ, केपी ओलीलाई हटाउ । महन्थ ठाकुरलाई ल्याउँ तर केपीलाई हटाउँ । शेरबहादुरलाई ल्याउँ केपीलाई हटाउँ भनेको होइन ? अनि आज शेरबहादुर आएकोमा टाउको दुखाइ ? हिजो ल्याउन माधव कामरेड तपाईं अगाडि बढ्नुस् पूरा अधिकार दिन्छौं कसलाई कसरी फकाउनुपर्छ सक्दो गर्नस् तपाईंलाई पूर्ण अधिकार छ भन्ने । त्यसो हुनाले अहिले सिंगो केन्द्रीय कमिटी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने अझै पनि मौका दिउँ तर हाम्रा गतिविधि रोक्ने काम नगरौं । अब सदस्यता रोक्दैनन् भने हामी पनि सदस्यताको काम गरौं । जसले रोक्छ त्यसलाई पर्खिने छैन । यसपछि हामी आफ्नो किसिमले गतिविधि गर्छौं । साथमा जो आउनुहुन्छ ठिकै छ । जो छुट्नुहुन्छ केही भन्नु छैन । त्यहाँबाट नै उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ सुरक्षा हुन्छ व्यक्तित्व उठ्छ भने आन्दोलन उठ्छ भने त्यहाँबाटै उठाउने नि । के फरक पर्छ र ∕ गए, कम्तिमा १० हजार मान्छे त तयार पारे विप्लवले । १० हजार त कम्युनिस्ट भए । प्रचण्डले केही गर्नुभयो । वैद्यले केही गर्नुभयो, कम्युनिस्ट त भए । मोहनविक्रमले जडसुत्रवादी विचार बोक्नुभयो । तर इमानदार भएर कम्युनिस्ट हुनुपर्‍यो । जडसुत्रवादी भएपनि कम्युनिस्ट हुनुपर्‍यो । हामी त क्रान्तिकारी गतिशील कम्युनिस्ट हौं । देशको परिस्थिति बुझेका जनताको नाडी छामेका छौं । जनताको बहुदलीय जनवादमा अघि बढेका छौं ।
अहिलेसम्म सबै मोर्चामा जित्दै आएका छौं । त्यसकारण हामीले हतासको मानसिकता राख्नु छैन । ओली सबै कदम हार्दै आएका छन् । हामीले हराउने तर हामी उत्साहित नहुने ? अनि त्यो बेलामा खुट्टा कमाउने ? रामबहादुरले जित्ला कि भनेर त्राहिमाम हुने । हैन एकता नै भंग हुन्छ भन्ने ? भंग त भएन त ? कर्णालीमा भए समाप्त हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो भएन त ? सुदुरपश्चिममा बर्बाद हुन्छ भनिन्थ्यो भएन त ? पृथ्वीसुब्बा भए, शंकर पोखरेल भए सिद्धिन्छ भन्ने थियो सिद्धिएन । त्यो सबै ओलीको कारणले भएको हो नि त । आफ्नो बहुमत थिएन भने माओवादीलाई फकाएर राखिदिएको भए । एक्लै ओलीबाट पार लागेन भने हामी सबैको साथ लिइएको भए के कोही हावी हुन सक्थ्यो यहाँ ? सक्दैनथ्यो । त्यसो हुनाले आफ्नो गल्ति कमजोरी स्वीकार नगर्ने । महसुस नगर्ने । अनि त्यसपछि पनि दम्भको भाषा प्रयोग गर्ने दम्भको घोडा चढ्ने । यो प्रवृतिका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिने आँट गर्ने कि नगर्ने ?
त्योभन्दा अगाडि बढ्दै यहाँ हामीले रामबहादुरलाई हराइदियौं । खिमलाल देवकोटालाई जिताइदियौं । हामीले केपी ओलीका विरुद्धमा जुध्दाखेरि उनी त ५ वर्षका निम्ती शासकको रूपमा बस्नेवाला थिए । सिलौटोमा पिनेर अचार बनाएर हामीलाई सिध्याउने पक्षमा थिए सकेनन् । तर अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचमा लागेका छन् । चिह्न देख्न पर्दैन हामीले । २८ दिनमा आउछु भनेका होइनन् ?
राजिनामा दिंदा आकाश खस्छ ?
हामीले शेरबहादुर सरकारलाई नजिताएको भए हुन्थ्यो के ? त्यै दिन प्रतिनिधिसभा भंग हुन्थ्यो । तुरुन्तै चुनावको घोषणा हुन्थ्यो । कोरोना बोकेर हामी जनताको बीचमा जाने थियौं । चुनाव पनि हुने थिएन । पार्टी बदनाम थियो । हार हुने थियो । चुनाव नभएको भए त देश ठूलो संकटमा जाने थियो । हामीले जोगायौं त । हामीलाई स्याबासी दिनुपर्ने होइन ? धारे हात लगाएको छ, गाली गरेको छ, निन्दा गरेको छ । मात्र आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर । प्रधानमन्त्री हामी बनेको होइन ? पार्टीका कारण मैले राजीनामा गरेको होइन ? झलनाथ कमरेड प्रधानमन्त्री बनेको होइन ? पार्टीभित्रको कारणले राजीनामा दिएको होइन ? अनि केपी ओलीले विश्वास जित्न सकेनन् भने राजीनामा दिँदा आकाश खस्थ्यो ? पेवा हो उहाँको ? त्यसो हुनाले उहाँमा जुन किसिमको व्यक्तिवादी प्रवृति हुर्केको छ । अहंकार बढेको छ । गैरकम्युनिस्ट आचरण विकास भएर गएको छ । विदेशी सामु लम्पसार पर्ने देखिएको छ । त्यसका विरुद्धको यो लडाईं हो ।
यो लडाइँमा दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । विचारको लडाइँ जारी छ । हामी जे कदम चालेका छौं, ठीक चालेका छौं । देशलाई ठीक दिशामा लिएर गएका छौं । देशलाई अस्थिरताबाट जोगाएका छौं । संकटबाट जोगाएका छौं । अहिले पनि जोगाएर लानुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, केपी ओलीभन्दा गतिलो हुन् तर कम्युनिस्टभन्दा गतिला होइनन् शेरबहादुर । सिंगो एमालेभन्दा गतिला होइनन् हामीलाई थाहा छ । तर धेरै बदमासभन्दा कम बदमासलाई ल्याउनुपर्छ भनिन्छ । ऊ त लोकतन्त्रवादी मान्छे हुन् कमसेकम ।
हेर्नुन् त, ऊ प्रधानमन्त्री भए, हामी पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्मान गरेर बोलाए । विशिष्ट अतिथि बनाएर कदर गरे । माधवजीले बाघ सम्मेलनमा यस्तो ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुभयो भने । केपी ओलीले सम्झिए आजसम्म ? यत्रो वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले सम्झिए आजसम्म ? कस्तो यहि पार्टीको मान्छे यहि पार्टीको नेता आफ्नो पार्टीभित्रको सिनियर नेताको मानसम्मान कदर गर्न नसक्ने भनेपछि अपमानको कुरा फिल हुन्छ कि हुन्न ? इतिहासप्रति न्याय हुन्छ ? संस्कार कसको राम्रो रहेछ कम्युनिस्ट कि कांग्रेसको ? म त भन्छु कांग्रेसको ।
कांग्रेस पार्टीमा पार्टीभित्रका मान्छेलाई सरकारी मुद्दा चलाएर जेलभित्र कोचेको पाउनुहुन्न । यहाँ त कसरी हुन्छ कोचेर पठाइदिने । माथि त ठूला केपी जिल्ला जिल्लामा साना केपी उस्तै छन् । भाषण सुन्नुस्, अभिव्यक्ति सुन्नुस् । यो सबै चिज हेर्दा अहिले हामील लडाइँ, हामी बीचको मूल समस्या के हो, फरक कुरा के हो पहिचान गरौं । फरक भनेको केपी ओलीमा भएको व्यक्तिवाद, सामूहिकताको अभाव, दक्षिणपन्थी विचलन र सर्वसत्तावाद हो । यस्ता शासक दुनियाँमा भएका छन् । रोम जलिरहेको थियो निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए । उनलाई कुनै मतलव थिएन । देशमा पार्टीमा समस्या भएको छ, केपी ओलीलाई कुनै मतलव छैन । यता छलफल गर्न सकिंदैन थियो ? आउनुस् कामरेड छलफल गरौं भन्न सकिंदैनथ्यो ? हामी फरक विचार समूहप्रति यत्रो पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने के आवश्यकता थियो ?
विष्णु पौडेल र सुवास नेम्बाङको झण्डै छाला काढे’
हाम्रो अपराध यत्ति न हो कि नवौं महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने दुस्साहस गर्यौं । उहाँका विरुद्धमा उठ्ने आँट, अपराध गर्यौं हामीले । त्यो आधारमा तपाईंहरूले मलाई भोट दिनुभयो, त्यत्ति मात्रै अपराध हो तपाईंहरुको । भोट दिएबापतको अपराध हो । माधव नेपाल राम्रो हो उहाँको पक्षमा छु भनेबापतको अपराध हो । वार्ता टोलीले वार्ता गरिरहेको थियो उहाँले विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई भन्नु भएछ ‘ए म त तपाईंहरू आफ्नो मान्छे ठान्या थिए नेपालको पक्ष लिँदै हुनुहुन्छ ?’ ल त्यसो भए ठीक छ तपाईंहरू नै वार्ता टोलीमा जानुस् भनेपछि त झन्डै छाला काढेको उहाँहरूको । भनेको त्यहाँभित्रका मान्छेहरू पनि दिक्क हुन थालेका छन् । यो केपी ओलीको प्रवृति ठीक छैन भन्ने महसुस हुन थालेको छ । यो सबैले गर्दाखेरि हण्डर ठक्कर खाएर महसुस गर्ने हामीले महसुस नगर्ने । यस्तो खालको प्रवृतिले हामीलाई विजयको दिशामा अगाडि बढाउन सक्दैन ।
अनन्तकालसम्म वार्तामा झुण्डिनु हुँदैन
विजयको दिशामा अगाडि बढ्ने हो प्रष्ट दृष्टिकोण राखेर अनन्तकालसम्म वार्तामा झुण्डिएर केही पनि हुँदैन । समानान्तर गतिविधि निरन्तर जारी राखेर हामीले जानुपर्छ । यदि केपी ओलीले हामीलाई एउटा कित्तामा पुर्‍याउन खोज्छन् भने हामी विकल्पको निम्ती तयार हुनुपर्छ । तर अहिले हामी त्यो दिशामा जानुपर्छ भनिरहेका छैनौं । अहिले विद्रोही मानसिकताका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । अझै पनि एकताको भाव राखेर अगाडि बढिरहेका छौं । भोलि बैठकमा के गर्छन् त्यो हेर्छौं ।
अब हो होइन भन्ने कुराको जाँच भोलि हुन्छ । कुनै पनि गतिविधि रोकेनन् भने हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । शक्ति जम्मा गर्दै जाने । शक्ति जम्मा गरेपछि माथि केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्न के को अप्ठ्यारो छ ? ७७ जिल्लामा संरचाना छँदैछ । प्रदेशमा संरचना बनाए भैगो । जनवर्गीय संगठन छँदैछ । सबै साथीहरूको मनोबल उच्च छ । केही साथीहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ होला । हिजो साथमा आएका मान्छे लालबाबु पण्डित गइदिए । कृष्णभक्त पोखरेल कुर्लीकुर्ली सर्वोच्च अदालतमा गएर बहस गर्ने मान्छे भागे गर्ने के त ? हुन्छ,यस्ता मान्छेहरू भाग्छन । टिक्ने टिक्छन्, भाग्ने भाग्छन् । भाग्नेको पछि कोही पनि जाँदैन । त्यसअर्थमा हामी के हेर्छौं भने हामीले लिएको विचार ठीक छ कि छैन ? ठिक छ भने अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सकेसम्म धेरै मान्छेलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । केपी ओलीसँग रहेका पनि राम्रा मान्छे छन् भने साथमा लिएर जानुपर्छ । पूर्वाग्रह कतै पनि राख्नु पर्दैन । हिजो हामीलाई विरोध गरेको छ भन्ने कसैले महसुस गर्छ भने हिजो हाम्रो साथमा नभएता पनि त्यो साथमा आउँछ भने हामीले त्यहाँ पोजेटिभ धारणा राखेर चल्नुपर्छ । सुधार्ने धारणा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी आग्रही पूर्वाग्रही र सानो चित्त भएका मान्छे होइनौं ।
घरमा पनि झगडा हुन्छ । तर पारस्परिक रूपमा विश्वास भएन भने लोग्ने स्वास्नी त सँगै बस्न सक्दैनन । पारपाचुके गर्छन् । मार्दिन्छ क्या हो लोग्नेले घाँटी थिचेर भनेर डर भयो भनेर बस्नै सक्दैनन् । झन् कुट्न थाल्यो भने के हुन्छ ? त्यसो भएकाले अलग हुन्छ । सीमासम्म बस्छन् सीमा नाघ्यो भने हुँदैन ।
अपमान मर्यादाको सिमा नाघ्छ र विश्वासको खाडल ठूलो हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा अर्को बाटो रोज्ने परिस्थिति बन्छ । त्यसले आनन्दको जीवन बाँच्न सक्दछ ।
Last Updated on: August 8th, 2021 at 11:40 am
धनुषामा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भइ दुर्घटना हुदाँ ३५ वर्षीय संजिवको मृत्यु
यी हुन् संसारमै सबैभन्दा सुन्दर अनुहार भएकी महिला, विज्ञानले नै प्रमाणित गरिदियो
सगरमाथा आधार शिविर हिंडेका भारतीय चिकित्सक बेपत्ता
पोखरीमा डुबेर बेहोस भएका दुई बालिकाको मृत्यु, शोकमा डुब्यो गाँउ